I-Hebei Huijiong yokuhweba co., Ltd. itholakala eShijiazhuang, eChina, ecaciselwe izinsimbi ezingenasici, Izindebe Zekhofi, Amabhodlela Amanzi Ensimbi Engagqwali, Amabhodlela e-Aluminium Amanzi, Amabhodlela amanzi we-Bamboo, Amabhodlela Amaphrotheni Shaker, I-Ceramic Coffee Mug, Ibhokisi Lesidlo Lensimbi Engagqwali , Izinkomishi zeglasi nezimbiza zokudla, ezifanele imindeni, amahhotela, ngaphandle, amahhovisi, ezemidlalo njll. Sihlale sinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezisebenza kahle.
Sikulayini iminyaka eyi-18, okuhlangenwe nakho kweminyaka engu-25 yokukhiqiza. Kuthunyelwe emazweni angaphezu kwama-80, ukuphinda i-oda okungu-90%.
Yonke imikhiqizo ibanga lokudla, elifanele njengokokujwayelekile Komhlaba jikelele.
Ithimba lethu lobuciko linganikela ngezinto ezintsha njalo ngesizini ngisho nenyanga ngayinye, ngakho-ke sinethemba lokuthatha izinto ezintsha ezengeziwe futhi sisize ukuwina ibhizinisi lethu sobabili. Ngeminyaka eyi-18 yokuhlangenwe nakho ekukhiqizeni nasekukhangiseni inkomishi, bonke abasebenzi, ngenxa yemishini yobuchwepheshe besimanje, bazibophezele ekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni elifanele ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu emhlabeni. Sinamathela kwifilosofi yekhasimende kuqala ukukhonza amakhasimende. Uyemukelwa kuphenyo lwakho futhi ukusebenza kahle kwethu nobungcweti bethu kuzokwenza ukujabulele ukusebenza nathi.
Ubuchwepheshe-Siphikelela ezimfanelweni zemikhiqizo futhi silawula ngokuqinile izinqubo ezikhiqizayo, ezibophezele ekwenziweni kwazo zonke izinhlobo.
Izinzuzo-Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle nesikweletu ukusivumela ukuthi sikwazi ukusetha amahhovisi egatsha nabasabalalisi ezweni lethu.
Insiza-Noma ngabe kuthengiswa ngaphambili noma ngemuva kokuthengisa, sizokunikeza insizakalo enhle ukukwazisa futhi usebenzise imikhiqizo yethu ngokushesha okukhulu.
Ukudalwa kwenhloso-Inkampani isebenzisa amasistimu wokuklama athuthukile nokusetshenziswa kokuphathwa kohlelo lwe-ISO9001 2000 lomhlaba jikelele.
Ikhwalithi enhle kakhulu-Le nkampani igxile ekukhiqizeni imishini yokusebenza ephezulu, amandla aqinile wezobuchwepheshe, amakhono okuthuthuka aqinile, izinsizakalo ezinhle zobuchwepheshe.
Iqembu lobuchwepheshe elinamandla--Sineqembu eliqinile lobuchwepheshe embonini, amashumi eminyaka wesipiliyoni sobungcweti, izinga lokuqamba elihle kakhulu, okwenza ikhwalithi ephezulu yekhono lokusebenza kahle.
Hebei Huijioing Ukuhweba Co., Ltd.
, © Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.